तिथि मेरो पत्रु » अनलाइन डेटिङ कुराकानी विषय 100% सफलता
अनलाइन डेटिङ कुराकानी विषय 100% सफलता
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 28 2020 |2मिनेट पढ्न
पछिल्लो एक दशक अनलाइन डेटिङ मागेर बावजूद आफ्नो उमेर धेरै पुरुष र महिला देखेको छ. एक अनुसार अनुसन्धान जुलाई मा सञ्चालन, 2014, देश अहिले छ 41,250,000 आफ्नो जीवन मा केहि बिंदु मा अनलाइन डेटिङ प्रयास गरेका छन्, जो मान्छे.
अमेरिकी वर्तमान जनसंख्या छ विचार 361.1 लाख, यो अनलाइन डेटिङ को अवधारणा भन्दा बढी woo गर्न व्यवस्थित भनेर भन्न सकिन्छ 11% देश मा मान्छे. त्यसैले, यी के 11% मानिसहरूले अनलाइन आफ्नो क्षमता जोडीलाई पूरा गर्दा कुरा?
मानिसहरूले अनलाइन डेटिङ साइट मा प्रत्येक अन्य पूरा अघि कुराकानी वास्तव मा धेरै सुरु. सही साथी रही को आफ्नो अवसरहरुमा वृद्धि गर्न, तपाईं सिद्ध प्रोफाइल हुनुपर्छ, आफैलाई लागि सुनाएको प्रोफाइल. यो एक हत्यारा शीर्षक पूरा गर्नुपर्छ, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो फोटो र वास्तवमा संग कुराकानी गर्दै चासो देखाउने अघि तपाईं मानिसहरूलाई चिन्न चाहन्छु केही जानकारी. तपाईं सिद्ध प्रोफाइल छ भने, अनलाइन सिद्ध व्यक्ति पूरा गर्न आफ्नो संभावना धेरै उच्च हुनेछ.
अब तपाईं प्रश्न कुरा गर्न प्रसंशक मिल्यो छ कि सबै भन्दा राम्रो विषय हो मा कुरा के हो. यहाँ अनलाइन डेटिङ कुराकानी विषयमा केही सुझाव छन्.
प्रशंसा रुचि छैन जो केही छन्. त्यसैले, तपाईं अन्य व्यक्ति बधाई गरेर कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. आदर्श तरिका उहाँको गरेको छनौट प्रशंसा गरेर सुरु गर्न छ / उनको. उदाहरणका लागि, तपाईं भोजन को व्यक्तिको विकल्प प्रशंसा गर्न सक्छन्, संगीत को स्वाद, आदि. यो आफ्नो क्षमता साथी तपाईंलाई वास्तवमा आफ्ना / उनको प्रोफाइल माध्यम पढ्न प्रयास को एक धेरै मा गरेका छन् भनेर बुझ्न बनाउन हुनेछ.
एक व्यक्ति को अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल पढ्दा पनि तपाईं प्रजा उहाँले थाह गर्न अनुमति दिन्छ / त्यो चासो छ. तिनीहरूलाई देखि, कुराकानी अगाडी चाल पनि तपाईं चासो र भन्ने विषयहरू छान्न, तिनीहरूलाई कुरा सुरु. यो च्याट बढी आकर्षक दुवै पक्षहरु लागि बनाउन हुनेछ. तपाईं एक विशेष व्यक्ति संग कुनै पनि चासो साझा छैन भने, त्यो / त्यो शायद मिति गर्न सही व्यक्ति होइन.
तपाईं व्यक्ति संग कुराहरु सहज महसूस शुरू रूपमा, तपाईं जीवनको बारेमा छलफल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं जीवनमा गरेका छन् कुरामा कुराकानी हुन सक्दैन, जीवन मा आफ्नो उद्देश्य, बाल्यकाल को तरिका तपाईं थियो, र यति मा. बिस्तारै अन्य व्यक्तिको रूपमा उनको / उनको जीवनको कथाहरू सुनाएर प्रतिक्रिया सुरु, तपाईं अधिक र अधिक रोचक बनने च्याट पाउनुहुनेछ. आदर्श, के तपाईं छ च्याट पहिलो समयमा पछिल्लो सम्बन्धको बारेमा कुरा सुरु हुँदैन; यस्ता विषयहरू तपाईं को दुई प्रत्येक राम्रो तरिकाले अन्य समझ सुरु पटक छलफल गर्नुपर्छ.
अनलाइन daters को बहुमत तिनीहरूलाई हाँस्न बनाउन सक्ने मान्छे को बैठक मन; यस तिनीहरूले हौं लिंग को साँचो बावजूद खडा. त्यसैले, केही मजाकिया एक-liners र मजाक एक साझा कुराकानी अधिक सोस्ने बनाउन एक ठूलो तरिका हो. आफ्नो हास्य संग घटिया हुन प्रयास कहिल्यै, र पनि तपाईं संग कुराकानी व्यक्ति को मजा गर्नबाट.
अनलाइन डेटिङ कुराकानी विषय स्वाद आधारमा फरक गर्छन, शैक्षिक पृष्ठभूमि र मान्छे को उमेर. त्यसैले, एक अनलाइन मिति समयमा कुराकानी विषय रोज्दा तपाईं मन मा यी कारणहरूले गर्नै पर्छ.
फेसबुक मा तिथि गर्न कसरी
9 तिथिहरु सैन देखि हरेक मा जान्छ